NRNA KUWAIT > About Us > Description
के हो एन आर एन ?
“गैर आबासिय नेपाली” एनआरएनए भनेको नेपाली मुलुकको बिदेशी नागरिक अथवा चालु आर्थिक बर्षमा १८२ दिन भन्दा बढी सार्क मुलुक वाहेकका देशहरुमा अध्ययन, पेश, रोजगारी वा ब्यवसाय गरी बसेको नेपाली नागरिकलाई बुझाउछ त्यसैले हामी सबै गैर आवासिय नेपाली हौ ।
नेपालीका लागि नेपाली भन्ने मुल नारालाई आत्म साथ गर्दै विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई एउटै साझा सञ्जालमा संगठित गरी बिदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान सिप र पुँजीलाई नेपाल र नेपालीको हितमा उपयोग गरी नेपालको बिकास र प्रवर्द्धमा टेवा पुर्याउन, गैर आवासिय नेपालीहरुको हितको पक्षपोषण गर्न संगठित रुपले अघि बढनका लागि सन २००३ मा लण्डनमा सम्पन्न गैर आवसिय नेपालीहरुको भेलामा ब्यापक छलफल भई आफनो गतीबिधीहरुलाई समान्वय एवं संचालन गर्ने आधार भुत मानव अधिकार प्रति प्रतिवद्ध एक जिम्मेवार संस्थाको गठन हुनु पर्ने आबश्यकतालाई मनन गरी एक स्वतन्त्र, गैर नाफामुलक गैर राजनितिक गैर सरकारी, चिरस्थायी संस्थाको स्थापना गरिएको हो जस्लाई एन आर एन ए गैर आवासिय नेपाली संघ भनिन्छ ।
एन आर एन ए स्थापनाकालदेखि नै आफैमा एक स्वतन्त्र सामाजिक सँस्थाको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चिनिदै आएको छ । । यिनै उद्देश्यलाई साकार गर्नका लागि विश्वका ५९ राष्ट्र्मा एनआरएनको सञ्जाल फैलिएको छ । कुवेतमा बस्ने नेपालीहरु पनि यो अभियानमा अत्यन्त कृयासिल छन् ।
‘हाम्रो सञ्जाल-हाम्रो पहिचान : समृद्ध नेपाल’ अर्थात बैदेशिक रोजगारिलाई सुरक्षित मर्यादित र ब्याबस्थित हुनु पर्ने माग राख्दै बिदेशमा रहेको यो सृजनसिल शक्तिलाई कुनै न कुनै रुपमा राष्ट्रको बिकासमा सरिक गराउन, सुन्दर, शान्त र संबृद्धशाली राष्ट्र निर्माण गर्नु र स्वदेशी तथा बिदेशी लगानी कर्ताहरुलाई नेपालमा भित्र्याउन, नेपालको आर्थिक, सामाजिक,धार्मिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक एबं पर्यटन बिकास र पवर्द्धनमा टेवा पुर्याउन, नेपाली समाजले भोगीरहेका समस्याहरु कम गर्न बिशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिने, रोजगारिका अवसरहरु सृजना गर्नका लागि उद्योग कल कारखानाको स्थापनामा जोड दिने र नेपाली कला संस्कृति बिदेशि भुमिमा दिगो राख्ने जस्ता उद्देश्य लिएर यो गौरबमय संस्था अगाडि बढेको छ
एन आर एन भनेको एक नेपालीलाई पर्दा अर्को नेपालीले सहयोग गर्ने, नेपालीले नै नेपाल बनाउनु पर्छ । बिदेशमा आर्जेको कमाइले सुन्दर शान्त र समृद नेपालको निर्माण गर्नु तथा नेपालको राजनैतीक अराजकता र बेरोजगारिका कारण बिदेश पलायन हुन वाध्य भएका नेपाली नागिरकहरुको लागि सुरक्षित आप्रवास जस्ता नाराहरु बोकेको पवित्र संस्था हो ।
किन आबद्ध हुने एन आर एन एमा खाडि मुकुकमा कार्यरत नेपाली ?
बैदेशिक रोजगरिका लागि खाडी मुलुक आउने नेपालीहरुको सुरक्षित आप्रवास अर्थात बैदेशिक राजागारी सुरक्षित मर्यादित र ब्याबस्थित हुनु पर्ने उनिहरुको धनमाल जिउज्यानको ग्यारेन्टि हुनु पर्ने माग राख्दै आएको छ । एन आर एन नै यस्तो संस्था हो जस्को नेपाल सरकार सँग प्रतक्ष सरोकार छ । नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका कुटनैतीक नियोगमा यस्को मान्यता प्राप्त छ । हालै सम्पन्न एन आर एन ए को पाचौ विश्व सम्मेलन नेपाल सरकार, नेपाल उध्धोग बाणिज्य महसंघ र गैर आबासिय नेपाली संघको सहकार्य र सहभागिता गरिएको थियो । सम्मेलनको आयोजनाका लागि नेपाल सरकारका माननीय उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरिय आयोजक समितीको गठन गरेको थियो । उक्त समितीमा नेपाल सरकारका बिशिष्ट ब्याक्तिहरु थिए । यसबाट बुझन सकिन्छ एन आर एन ए को नेपाल सरकार सँग कति गहिरो र सिधा सम्बन्ध छ । नेपाल सरकारले कति मान्यता दिएको छ । खाडीका मजदुरहरुका समस्याहरु, मागहरु नेपाल सरकार सम्म पुराउनको लागि माध्यम अथवा भरेयाङको भूमिका एनआरएनए ले खेल्न सक्छ र खेलेको पनि छ ।
हामी संस्थामा आबद्ध भएर संस्थालाई बलियो भनायौ भने हाम्रा समस्याहरु सरकार सम्म पुराउन सहज हुने मात्र होईन हामीहरुले एक नेपालीलाई परेको बेला अर्को नेपालीले सहयोग गर्न सक्छौ । नेपालीले नेपालीलाई सहयोग गर्न संस्थामा नै आबद्ध हुनु पर्छ भन्न खोजेको होईन तर यहाँ नेपालीले नेपालीलाई नै ठगेको अवस्थामा संस्थाले ठुलो राहात पुराउन सक्छ । सित उभाएर घैला भरिन्छ भने झै संस्थागत रुपम तपाईं हामीले गरेको सानो सहयोगले पीडितहरुलाई ठुलो राहात पुग्छ ।
बैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत आएकी नेपाली चेली डोल्मा शेर्पालाई सहकर्मि फिलिपिनी महिलाको हत्याको अभियोगमा मृत्‍यु दण्डको घोषणा गरिएको थियो । नेपाली नागरिकलाई मृत्‍यु दण्ड (फासी) दिने नेपाली संबिधान, कानुनमा छैन । बिदेशी भुमीमा नेपाली चेलीलाई फासीबाट बच्चाउनको लागि एन आर एन ए ले ३६ लाख नेपाली रुपैयाँ जम्मा गरी फिलिपिनी महिलाको परिवारलाई बलड मनी तिरी फासी दिनबाट रोकेको थियो । कुवेतमा दुताबसको स्थापनाको लागि सरकारलाई दिएको दबाब र पहल कुवेतबासीले भुलेको नहुनु पर्छ । त्यस्तै हाल खाडीको अर्को मुलुक ओमानमा नेपाली दूताबासको स्थापनाको लागि जोरदार अभियान सुरु गरेको छ । धेरै कामदारहरु कार्यरत देशका दूताबसहरुमा श्रमसहचारि नियुक्त गर्नु पर्छ भन्ने एन आर एन एको मागलाई नेपाल सरकारले आत्मसाथ गर्दै कुवेतमा पनि केही दिन भित्रै श्रमसहचारि आउँदै छन ।
पुनः श्रम स्विकृति लिनुपर्ने प्रावधान हरेक दृष्टिले अव्यवाहरिक रहेको भनी एन आर एन एले सरकार सँग बार्तागरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्र विमान स्थल हाता भित्र बैदेशिक रोजगार बिभागको डेस्क स्थापना गरी बैदेशिक रोजगारी सम्बन्ध भुक्तानीको व्यवस्थालाई सहज बनाउने। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्र विमान स्थलमा रहेको अध्यगमन डेस्कमा बिदामा नेपाल फर्कने कामदारहरुको पासर्पोटमा नै यस बिषय बारे जानकारी गराउने सूचना समावेश गरी दिने भएको छ ।
नेपाल सरकारले पटक पटक प्रतिबद्धता जनाए अनुरूप विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूभित्र नै एनआरएन डेस्कको स्थापना गरी गैरआवासीय नेपालीहरू र नेपाली दूतावास बीचको सम्बन्धलाई अझ मजबुत र परिणाममुखी बनाउन र गैरआवासीय नेपालीहरूको महत्वपूर्ण उपस्थिति भएका मुलुकहरूमा आवश्यकता अनुसार अविलम्ब दूतावास, कन्सुलेट अथवा अवैतनिक दूतको व्यवस्था गरिनुपर्ने समेत माग गरेको छ ।
माथि उल्लेख बुदाहरु उदाहरण मात्राहुन गैर आबासिय नेपाली संघले नेपाल र नेपालीका लागि अनगिन्त्य योगदानहरु पुराइ सकेको छ ।
एन आर एन ए लाई लाग्ने गरेका आरोप !
गैर आवासिय नेपाली संघ पूँजीवादी संस्थाहो धनाढ्य र नव-धनाढ्यहरुको लागि मात्र हो भनी आलोचना गर्ने हरु धेरै भेटिन्छन् । यस्मा कुनै तुक छैन सबै कपोकल्पित निराधार कुराहरु हुन । एन आर एन एमा जोकोही आबद्ध हुन्छ सेवाको भावनाले आबद्ध हुन्छ । नेपाल र नेपालीको बिकास हामी नेपालीले नै गर्नु पर्छ भन्ने भावनाका साथ आबद्ध हुन्छ । यो कुनै राजनितिक संस्था होईन । यो संस्थामा लाग्नेहरुले केही न केही योगदान दिनु पर्छ । कुनै एन आर एनको पदाधीकारीले खाडीमा बिचल्ली परेका नेपालीहरुको सहयोगको लागि दुई चार करोड सहयोग गर्छ । दान दिन्छ भने त्यस्ता ब्याक्तीलाई पूँजीवादी भन्नेहरु यो समाजका कुतत्वहरु हुन । पैसा कसैलाई धेरै हुँदैन । संसारमा धेरै धनी मान्छेहरु छन जस्ले एक पैसा गुमाउन चाहन्न तर एन आर एनमा लागेका ब्यातिहरु धन भन्दा मन ठुला भएका छन ।
एन आर एन सामाजिक संस्था भएपनी अरु सामाजिक संस्था भन्दा अलिकती फरक छ । विश्वको ५९ देशमा यसको सन्जाल फैलिएको छ । विश्वको कुनै पनि कुनामा नेपालीलाई समस्या परेको बेलामा एन आर एन एका पदाधीकारीहरु पुगेका छन । नेपाल सरकार समक्ष पुगेका छन । उनिहरु आफनो खल्तीको पैसा खर्च गरी हिंडेका छन नेपाल र नेपालीका लागि हिंडेका छन । संस्थालाई कसैले दिएको डोनेश अथवा मासिक लेबीबाट जम्मा भएको पैसा खर्च गर्न पाउदैन्न । त्यसैले एन आर एन एको नेतृत्व गर्न तन मन धनको आबश्यक पर्छ । यो संस्था भित्र तपाईं हामी जस्ता खाडीका मजदुरहरुको पनि ठाउँ छ । हाम्रो पनि अमुल्य योगदान हुन सक्छ ।
एन आर एन दोहोरो नगरिताको लागि मात्र हो भन्नेहरु पनि छन । एक पटकको नेपाली सधैंको लागि नेपाली भन्ने एन आर एन एको एउटा माग छ । तर एन आर एन त्यसैको लागि मात्र हो भन्नेहरु गलत छन । एन आर एन एले एउटा कुरा मात्र लिएर हिंडेको छैन । एन आर एनको केन्द्रिय उपाध्यक्ष र सचिब दुबइ र कतारबाट छन अब भन्नु होस उनिहरु दोहोरो नगरिताको लागि एन आर एनमा लागेका हुन त ?
एन आर एन ए दर्ता भएको छैन
हो अहिले सम्म गैर आबासिय नेपाली संघ नेपालमा दर्ता भएको छैन । तर यो कुनै गैर कानुनी काम गरेको ले अथवा नेपाल सरकारले दर्ता नगरेकोले दर्ता नभएको भने होईन । नेपालको संबिधानमा अर्थात राज्यले निर्धारण गरेको समयावधि दुई बर्षभन्दा बढिसमय देश बाहिर बसेकालाई एनआरएन मान्ने नीति छ । तर गैर आवासिय नेपाली संघको बिधानमा १ सय ८२ दिन बिदेशमा बसेकोलाई गैर आवासिय नेपाली मानिएको अवस्थामा यदि एनआरएनए संस्था दर्ता प्रकृयामा अघि बढ्छ भने सरकारको नीति अनुसार मात्रै चल्नुपर्ने हुँदा १ सय ८३ दिन बिदेशमा बिताएको लाई गैर आवासिय नेपाली मान्नु पर्ने माग राखी संस्था दर्ता नगराएको हो ।
एन आर एन ए को टोपी लगाएर नेपालीलाई ठग्छन भनी खाडीका एन आर एन ए हरु लाई निकै आलोचना गरिन्छ । केही त्यता ब्याक्तिहरु एन आर एनमा हुन सक्छन त्यस्ता ब्याक्तिहरुको संस्थाबाट सफाया गर्ने कर्तब्य र दाहित्व तपाईं हामीको हो । एन आर एन एको संजाल ठुलो भएकोले केही कलंकीत ब्यातिहरु नेतृत्वमा पुगेका हुन सक्छन । तर संस्था आँफैमा पवित्र छ । त्यसैले नेपालीका लाई नेपाली भनी सुन्दर सान्त र समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा गैर आबासिय नेपाली संघमा आबद्ध भएर हाते मालो गरौ !!